“Wax mar-marsiyo ah ma jiraan, Arsenal way na cuntay,.” Hazard iyo Kante oo qiray guul daradii foosha xumeyd ee ka soo gaartay Arsenal – Gool FM
“Wax mar-marsiyo ah ma jiraan, Arsenal way na cuntay,.” Hazard iyo Kante oo qiray guul daradii foosha xumeyd ee ka soo gaartay Arsenal
Byare September 26, 2016
(London) 26 Sebt 2016. Eden Hazard iyo N’Golo Kante ayaa qiray inay bur-burisay kooxda Arsenal iyadoo xiddigaha qadka dhexe ay soo bandhigeen bandhigoodii ugu xumaa tan iyo sidii uu xilka u qabtay Antonio Conte.
Arsenal ayaa badis iyo kubbad isugu dartay Blues ciyaartii dhawayd ay uga adkaatay 3-0.
Gunners ayaa guushaasi ku gaartay kaalinta saddexaad halka Chelsea ay u dhacday kaalinta sideedaad waxaana hogaanka Premier League looga hayaa 8-dhibcood.
“Wax mar-marsiyo ah ma jiraan, Arsenal way na cuntay,”. Hazard ayaa sidaa u sheegay SFR Sport.
Kante oo isna u waramayay isla TV-gan laga leeyahay Faransiiska ayaa sheegay in Arsenal ay si wayn uga gacan sareysay, goolkii koowaad, kii labaad misane kii saddexaad intaa kaddibna ay howshu u sahlanayd wiilasha Arsene Wenger.
Usain Bolt oo fariin u diray Pogba!
Xiddiga kooxda Heegan Mahad Yare oo dalka dib ugu soo laabtay